Amaanka magaalada Muqdisho oo la adkeeyay
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa waxaa loo adkeeyay si aad ah waxaa xiran wadooyin badan oo magaalada ah halka kuwa kalana ay u furan yihiin doorashada maanta ka dhaceysa magaalada awgeed.
Waxaa xiran Wadooyin ay ka mid yihiin wadada marta Buundooyinka ee kala qeybisa degmooyinka Xamar jajab iyo Waabari iskuna xirta xamarweyne iyo waabari, waxaa sidoo kale xiran wadada hormarta Xarunta Jen. Kaahiye ee isku xirta Dekada iyo Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Arintaasi waxa ay saameyn ku yeelatay dadka shacabka ee wadooyinkaasi isticmaali jiray kuwaasi oo saaka cagahooda maalaya, waxaa wadooyinkaasi oo dhan lagu arkayaa ciidamo sugaya amaanka oo celinaya dadka iyo gaadiidka.
Kadib shirjaraaid oo xalay si wadajir magaalada Muqdisho ugu qabteen Wasiirrada Gaashaandhigga iyo Arrimaha Gudaha Dowladda Soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in magaalada Muqdisho lagu qaban Karin wax banaanbax ah inta doorashadu socoto.
Wasiirrada ayaa ku sheegay in goaankan looga gol leeyahay sidii loo adkeyn lahaa ammaanka Caasimadda maadaama ay mudo 42sano kadib Muqdisho ka dhaceyso doorashada.
Wasiirrada ayaa sidoo kale shirkooda jaraaid ku sheegay in ammaanka magaalada Muqdisho loo xilsaaray ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM islamarkaana ay rajeynayaan in si nabad gelyo ah ay doorashadu ku dhacdo Insha Allah.